China Pet Cat Cat Disc epholileyo kunye funny Cat Table Pet Cat Cat Cat Adult Cat ehlotyeni amancinci Cat Cat Toy Toy mveliso kunye nabenzi | UMiaSein
Isilwanyana sasekhaya Ikati elula iDisk kunye neTeyibhile yeKati yeTafile Ikati yeKati yeKati yabantu abadala Ikhephu elipholileyo Ikati encinci yeTafile yeKati
Igama lemveliso: Isilwanyana sasekhaya Ikati elula iDisk kunye neTeyibhile yeKati yeTafile Ikati yeKati yeKati yabantu abadala Ikhephu elipholileyo Ikati encinci yeTafile yeKati
Inkcazo:Izinto kunye nomgangatho we-sisal uyathandwa, ongakhange uhlanjululwe sisisombululo samachiza kwaye unencasa ye-sisal fiber acid yoqobo. Ukhuseleko kunye nokukhuselwa kwendalo esingqongileyo, izixhobo ezikumgangatho ophezulu zokukhusela indalo zihlala ixesha elide kwaye zinobomi obude beenkonzo, iglu entsha yokhuseleko lwendalo ayicaphukisi. Iqinile kwaye izinzile, inoyilo loyilo oluchanekileyo, kukhuselekile ukuthintela ukujikeleza. Dibana nemingxunya yekati yokumba, kwaye unokuphumla xa udiniwe.
Indlela yoqeqesho lweekati zokusebenzisa isakhelo esinyukayo sekati: uqeqesho lokucholwa kwekati kunye nokubamba ibhodi okanye ikholamu yeplanga kufuneka iqale kwasebusheni. Inkqubo kukubeka iiposti okanye iibhodi kwindawo ebonakala kakhulu ukuba ikati inyuke isenyuka ukuze ifumane iindawo ekulungeleyo ukuziqonda. Ukuba akunjalo, umniniyo unokuyichukumisa kancinci intloko yekati ngesandla sakhe, kwaye ucinezele phantsi entloko ukuyinyanzela ukuba ibambe isithuba somthi. Emva kokukrwempa, imfihlo ye-gland kwiinyawo zekati iya kutyabeka kwindawo yokukrwela. Ngenxa yevumba lemfihlo, ikati iya kwiposti yomthi ukuze iyonwaya.
Igama lomxholo: Isakhelo esinyukayo sekati
Uhlobo: Inyosi, ibhola ye-hemp
Umbala: Ubungakanani (nge-cm): 27 * 16cm
Phawu: Inokunika iikati indawo yokudlala. Ubume obunemilinganiselo emithathu-bendawo bukulungele ngakumbi ukunyuka kwekati, kwaye ikholamu yentambo ye-hemp inokwenza ikati isile iinzipho zayo
Uhlobo lwelaphu: Iplate + mat yehlobo
Ukuhlamba indlela: Chela isilwanyana esibulala iintsholongwane okanye iPET ilaphu lokususa iintsholongwane, kodwa uphinde unyibilikise inxenye yento yokugxotha izinambuzane zekati yokutshiza. Ukuba unesicoci esinamandla sokucoca amandla, unokusebenzisa isicoci sokucoca ulwelo ukususa izibungu.
Indlela yokugcina: Gcina kwindawo epholileyo neyomileyo
Nceda uqaphele: Le mveliso iyilelwe kwaye yaveliswa yinkampani yethu ekhethekileyo. Le mveliso ayixhasi ulwenziwo. Umlinganiso wemanyuwali, kukho uluhlu oluthile lwempazamo, nceda uthathe eyona nto iyiyo njengomgangatho. Ukuba awonelisekanga yile mveliso, nceda unxibelelane nenkonzo yabathengi.
Egqithileyo Iimpahla zeenja Ekwindla nasebusika ziguqulwe zaba liCandelo eliNciphileyo uTeddy Bichon Hiromi Poodle Isinxibo sePuppy Ihembe elinemilenze emine Ihempe yokunxiba iWukong Pet Coat
Okulandelayo: Inja yesiLwanyana esiKhulu yokuQokelela isiXhobo sePoop
Inja yeNja inokuSuswa kunye nokuCocwa ngeLar ...
Inja enkulu yeMbasa esiDala ukuba sikhulu kwiZinja ezifudumeleyo kwiWi ...
Isinxibo sePropathi yenja yokunxiba eSanta Cla ...